Fandringanana ny harena voajanahary : maro ny fanadihadiana vitan’ny SCAPES, tsy nanagadra ny fanjakana | NewsMada
Nitatitra ny vaovao azony ireo mpanao gazety nanao fanadihadiana lalina (investigation) tao anatin’ny tetikasa SCAPES. Etsy ankilany, tsy nampihatra ny lalàna ny fanjakana ary tsikaritra fa mbola mitohy ny fandripahana, na eo aza ny fanamarihan’ny vondrona iraisam-pirenena.
Efatra taona! Nanomboka ny taona 2014 ny tetikasa Scapes, miara-miombon’antoka amin’ny USAID, tohanan’ny vahoaka amerikanina ara-bola. Miompana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, manoloana ny fandringanana ny harena voajanahary sy ny ambanin’ny tany ny tetikasa. Nofanina ny mpanao gazety ampolony maro amin’ny fanadihadiana lalim-paka, novatsina fitaovana ny Vondrona olona ifotony (VOI) sy ny mpisafo ala, nentanina ny tompon’andraiki-panjakana, sns.
Nitsidika toerana maro ny mpanao gazety vita fiofanana, sady nahita karazana fitrandrahana sy fandripahana amin’ny endriny samihafa. Anisan’izany ny fahasimban’ny sahandriaka any Alaotra, ny fanapotehan’ny mponina sy ny tompon’andraiki-panjakana ary ny mpanambola ny farihin’Alaotra, toeram-ponenan’ny gidro bandro, avadika ho tanimbary.
Aripaky ny mponina ny gidro any Lakato, distrika Moramanga. Mahatsiravina ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany sy ny hazo any Anosibe an’Ala ataon’ny manamboninahitra sy ny tompon’andraiki-panjakana sasany. Eo koa ny fandripahana hazo ataon’ny mpandraharaha iray mitsikomba amin’ny olom-panjakana teo aloha any Didy sy any afovoan’ny Tandavanala Ankeniheny –Zahamena (Caz).
Mijanona ambony latabatra
Any Sava, fantatra ny tambajotran’ny mpandraharaha mpanao trafika andramena, ka nofoanan’ny banky roa any an-toerana ny kaontin’ny roapolo mahery amin’izy ireo. Baranahiny ny fitrandrahana vatosoa ataon’ny sinoa any Ambanja. Mirongatra ny fambolena lavanila any anaty ala arovana any Marojejy sy Mananara Avaratra, sy ny maro hafa.
Manoloana ireo, tsy hita, hatramin’izao, ny famaizana henjana ataon’ny fanjakana. Hany mba zava-bita ny fananganana ny fitsarana manokana mikasika ny andramena, nolanin’ny antenimiera roa tonta ny novambra 2015. 10 volana aty aoriana, tsy niasa io rafitra manokana io, tsy fantatra ny mpikambana ao anatiny, tsy misy ny raharaha sahaniny. Toy ny hatramin’izay, mijanona ambony latabatra sy ambara amin’ny kabary ireny, fa tsy nisy vokatra na iray aza. Hivoaka tsy ho ela ny fepetran’ny Cites mikasika ny varotra iraisam-pirenena amin’ny zavamaniry na biby ahina ho lany tamingana. Efa vitavita ho azy ny “Raharaha Singapour”, navotsotra ny bolabola andramena 30.000, ary tsy fantatra na nankaiza ny vola azo taminy.
Sampandraharaham-panjakana amerikanina misahana ny fampandrosoana ny USAID. Azo antoka fa fantatr’izy ireo amin’ny antsipiriany ny manodidina ity tontolo iainana sy ny fandripahan’ireo mpanao trafika azy ity. Tantara mitohy!